तपाईंको घर, कार र अफिसमा लुकेका क्यामेराहरू कसरी पत्ता लगाउने? | OMG समाधानहरू
तपाईंको घर, कार र अफिसमा लुकेका क्यामेराहरू कसरी पत्ता लगाउने?
तपाईको घर, कार र अफिसमा लुकेका क्यामेराहरू फेला पार्नु यो अप्ठ्यारो काम हो। दुर्भाग्यवस, अधिक र अधिक व्यक्ति गोपनीयता को यो छाप्रो को बारे मा गुनासो को रूप मा यो एक उदीयमान प्रवृत्ति भएको छ। एउटा अध्ययनले दर्शायो कि विशाल 11 प्रतिशत उत्तरदाताहरूले आफ्नो घर, कार, अफिस वा होटेलमा लुकेको क्यामेरा भेट्टाए। तपाईंको वरिपरि लुकेका क्यामेराहरू कसरी जाँच गर्ने भनेर फेला पारेर आफैलाई रक्षा गर्नुहोस्। निगरानीको लागि हाम्रो उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू अन्वेषण गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लुकेका क्यामेराहरू जाँच गर्ने विधिहरू:
एक अन्तर्वार्तामा, एक प्राविधिक निगरानी काउन्टरमेजर र इंटेलिजेंस विशेषज्ञले आफ्नो जागिरको संवेदनशीलताका कारण आफ्नो नामको खुलासा गर्न अस्वीकार गरे र मंकलाई उपनाम दिए। उनले संयुक्त राज्य सेनाको विशेष अपरेशन समुदायको उच्च स्तरको लागि द्वन्द्व क्षेत्रमा लुकेका उपकरणहरूको खोजी गरे। लुकाइएको क्यामेरा खोज्नको लागि उनले हामीलाई सल्लाहको एक टुक्रा दिए।
लुकेका क्यामेराका लागि जाँचका लागि तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधिहरू छन्:
रेडियो फ्रिक्वेन्सी (आरएफ) को स्क्यान गर्दै
लेन्स पत्ता लगाउने
यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्क्यानिंग हो जुन सक्रिय रूपमा प्रसारण गरिरहेको यन्त्र पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। आजकल धेरैजसो मानिसहरुसँग आफ्नो गोपनीयता चाहिन्छ तर धेरै व्यक्तिहरु धेरै अन्य उपकरणहरु को उपयोग अन्यको गोपनीयता उजागर गर्न। धेरै व्यक्ति यस्ता उपकरणहरूको कारण फिक्समा छन् जसले अरूको गोपनीयतालाई हानी गर्दछ तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्क्यानरको आविष्कारको साथ, समस्या समाधान भएको छ। उदाहरण को लागी, जासूस क्यामेरा बग डिटेक्टर सिग्नल / लेन्स / चुम्बक डिटेक्टर (SPY 995), लुकेका एंटी-जासूस क्यामेरा बग डिटेक्टर (स्पाइक्सएनमक्स), GPS / SPY क्यामेरा RF डुअल सिग्नल डिटेक्टर, दायरा 1-8000MHz, GPS / 1.2G / 2G / 3G / 4G, दूरी 5-8 (SPY993)। यी उपकरणहरूको लुकेका क्यामेरा अन्वेषण गर्न एक उन्नत प्रकार्य छ।
लुकेका क्यामेरा कसरी पत्ता लगाउने:
तपाई घर, कार, होटल वा अफिसमा नजिकबाट अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने बारेमा चिन्ता गर्नाले तपाईंको आराम र आरामलाई बिगार्न सक्छ। जहाँ कुनै खोज सही छैन, तपाईं लुकेका जासूस क्यामेरा र रेकर्डि equipment उपकरणहरू पत्ता लगाउन को लागी केहि कार्यहरू लिन सक्नुहुन्छ। कुनचाहिँ उपायहरू रोजाई गर्ने निर्णयले तपाईको पक्राउ कति कडा हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ, र तपाइँ कति खोजी गर्न तपाइँको प्रवासमा बाधा पुर्‍याउन इच्छुक हुनुहुन्छ।
अत्यधिक सामग्र जनावरहरू, धुम्रपान डिटेक्टरहरू, तस्विर फ्रेम, बत्तीहरू, वा पुस्तकहरू जस्ता कुनै पनि ध्यान राखिएको चीजहरूको खोजीमा यस क्षेत्रको शारीरिक खोजी गर्नुहोस्। तपाईले क्यामेरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ वस्तुहरूको खोजी गरेर जुन कोठाको क्षेत्रहरूमा असामान्य तरीकाले देखाइन्छ। तपाईं कुर्सीहरू, टेबल वा सोफेहरू, वा भित्र भादाहरू र भाँडाहरू भित्र वा पर्दा पछाडि लुकाइएको लुकेका क्यामेराहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
अर्को लुक्ने बिन्दु भनेको रेकर्डि devices यन्त्रहरूको खोजी गर्नु हो। सबै सुरक्षित अलार्महरू, जसले सीसीटीभी उपकरणहरू उत्पादन गर्दछ, सबै बत्तीहरू बन्द गरेर साना हरियो वा रातो बत्तीहरू खोज्ने सल्लाह दिन्छ; यी रेकर्डिंग उपकरणहरूको लागि "पावर अन" एलईडी संकेतकका संकेतहरू हुन्। अर्को सुझाव भनेको इनपुट डटहरू वा फर्निचर केसिंग र भित्तामा प्वालहरू खोज्नु हो जुन यसको पछाडि लुकेको क्यामेरा स indicate्केत गर्न सक्दछ। तपाईंले रेफ्रिजरेटर र वातानुकूलन सहित सबै बिजुली उपकरणहरू स्विच गर्नुपर्दछ, र चकित पार्ने आवाज वा क्लिकको लागि सुन्नुहोस् जुन रेकर्डि devices यन्त्रहरू संकेत गर्न सक्दछ। एक इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रणित सेफ स्विच नगर्नुहोस्, किनकि यसले गल्ती निम्त्याउन सक्छ वा अप्रत्याशित शुल्कको कारण लिन सक्छ।
कुनै फ्ल्यासिंग वा प्रबुद्ध बत्तीहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्। धेरै जसो क्यामेरा र सुन्ने उपकरणहरू एक तयार वा प्रकाशमा समावेश छन्, र यसको फ्लसले तपाईंलाई यसलाई फेला पार्न मद्दत गर्दछ। जबकि यी बत्तीहरू बारम्बार असक्षम हुन सक्छन्, एक शुरुआत बिर्सिन सक्छ वा तपाईंलाई लागिपरेको उपकरणको लागि कहिले पनि खोजी नगर्दै भरोसा गर्दछ। बत्तीहरू बन्द गर्नाले तपाईंलाई यसको लागि खोजी गर्न मद्दत गर्दछ।
इलेक्ट्रोनिक आवाज, सुन्न को लागी सुन्न कोशिस गर्नुहोस्, वा कोठा खोजी गर्दा तपाईं कानाफूसी गर्नुभयो। यद्यपि धेरै रेकर्डि devices यन्त्रहरूले गोपनीयता मोडमा कार्य गर्न सक्दछन्, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणहरूद्वारा गरिएका क्लिकहरू प्राय: मौन गर्न सकिदैन। त्यहाँ सम्भवतः धेरै इलेक्ट्रोनिक ध्वनिहरू छन् जुन तपाईं ट्युन आउट गर्नुहुन्छ, त्यसैले कुनै फरक कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सहयोगी श्रवण यन्त्र, जस्तै श्रवण सहायता, सम्भवतः तपाईले पहिरन नगरेसम्म समर्थन गर्दैन, किनभने श्रवण सहायता आफैले बनाएको आवाजबाट विदेशी वस्तुको ध्वनी फरक पार्न गाह्रो हुन्छ। यस सन्दर्भमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर अत्यधिक उपयोगी छ। त्यस्ता जासूस उत्पादनहरू अन्वेषणको लागि हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्।
कोठाको विभिन्न भागहरूमा विशेष गरी परावर्तन सतहहरूमा फ्ल्यासलाइट चम्काउनुहोस्। कहिलेकाँही मानिसहरु ऐनामा वा अन्य प्रकारका गिलासहरूको पछाडि निगरानी उपकरणहरू लुकाउँदछन् जुन सामान्य प्रकाश अवस्थाहरू अन्तर्गत यसको पछाडि जे छ राम्ररी कभर गर्दछ, तर केहि पनि खुलासा गर्दछ यदि प्रकाश सीधा चम्केको छ भने। तपाईं गोप्य क्यामेराको लेन्सबाट परावर्तन पनि लिन सक्नुहुनेछ। फ्ल्यासलाइटले तपाईंको आँखाले खोजी गरेको स्थानको मात्रा सीमित गरेर तपाईंको शारीरिक खोजीमा मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई ठाउँबाट बाहिर केहि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाईंको अन्वेषणलाई सहयोग पुर्‍याउन रेडियो फ्रिक्वेन्सी (आरएफ) संकेत डिटेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्। यी ह्यान्डहेल्ड इकाइहरूले रेडियो रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू पहिचान गर्न सक्दछ जुन रेकर्डि devices यन्त्रहरूले काम गर्दछन्, र तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। जबकि एक संकेत डिटेक्टरले ठीक कहाँ लुकाइएको क्यामेरा बताउँदैन, यो तपाईंलाई चेतावनी दिन्छ जब तपाईं यसको स्रोतको बिस्तारै नजिक जानुहुन्छ, तपाईंलाई धेरै छिटो पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउँदै। यस सन्दर्भमा हाम्रो उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू उपयोगी छन्, अधिक विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
यदि तपाईं लुकेका क्यामेराको खोजीमा बढी समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अधिक ठाउँमा जहाँ जहाँ जासूसी क्यामेरा वा माइक्रोफोन लुकेको हुन सक्छ। ट्राभल टेक लेखक एन्ड्र्यू क्यापेल लेख्छन् कि क्यामेरा प्रायः ठूला चीजहरूमा लुकाइन्छ, उदाहरणका लागि ठूला टिभी स्क्रीनहरू। उनी लुकेका स्थान फिटिंग जस्तै दुई प्रशंसक, छत बत्ती केस र भेन्ट्स को रूप मा खोजी गर्न सुझाव दिन्छ; र साना परिवर्तनशील वस्तुहरू जस्तै अलार्म घडी, पोर्टेबल बत्ती, वा टेलिफोन।
साथमा, घर, अफिस वा कारमा हिडन क्यामेरा पत्ता लगाउने माथि उल्लिखित तरिकाहरू, हामी लुकेका क्यामेराहरू पत्ता लगाउने केहि थप सुझावहरू र विधिहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरको सहयोगमा इलेक्ट्रोनिक जासूस उपकरणका लागि कक्ष / कार / अफिस स्वीप गर्ने तरिका:
गोप्य सुन्ने उपकरणहरू वा बगहरू केवल सरकार द्वारा मात्र व्यवसाय वा व्यक्तिहरू जसले स्नुप गर्न वा अरूको जासूसी गर्न प्रयोग गर्दछन्। यद्यपि केहि उपकरणहरू यती प्राविधिक रूपमा उन्नत छन् कि तिनीहरू लगभग ज्ञानीय छन्, अधिक बगहरू सापेक्षिक सहजताका साथ पत्ता लगाउन सकिन्छ किनकि तिनीहरू शक्ति स्रोतहरू र रेडियो सals्केतहरूमा निर्भरताका कारण। सुन्न उपकरण यदि तपाईंको घर, कार्यालय, वा वाहन मा स्थापित गरिएको छ मा सम्झौता गर्न, तपाईं सबै शक्ति स्रोतहरू जाँच्नु पर्छ र क्षेत्र मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी को लागी स्क्यान गर्न आवश्यक छ।
ऊर्जा स्रोतहरू जाँच गर्दै:
सबै खोजी प्लेटहरू र तपाईंले खोजिरहनुभएको कोठामा प्लेटहरू स्विच गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले प्लेट हटाउनुहुन्छ, तपाईंले यसको पछाडि भित्तामा तारहरूको स containing्ग्रह समावेश भएको आयताकार प्वालहरू अवलोकन गर्नुपर्छ। यी प्वालहरू लुक्ने उपकरणहरूका लागि प्रमुख स्थानहरू हुन् किनकि यसले बिजुली स्रोतमा सजिलै पहुँच पुर्‍याउँछ: तारहरू। अब, आफ्नो फ्ल्यासलाइटलाई पर्खालको प्रत्येक प्वालमा चम्काउनुहोस्। तपाईं केवल भित्रबाट हेर्नुहुनेछ। यदि तपाईं कुनै कुराको बारेमा सचेत हुनुहुनेछ जुन शंकास्पद वा स्थान बाहिर देखा पर्दछ, यसलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस्। कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंले फेला परेको कुरा बताउनुहोस्।
कोठामा हुन सक्ने अन्य कुनै पनि पहुँच योग्य उर्जा स्रोतहरू जाँच गर्नुहोस्, जस्तै, फ्युज बक्सहरू र प्रकाश फिक्स्चर समान तरिकाले। फेरि, यदि तपाईले केहि खोज्नु भयो भने, पुलिसलाई कल गर्नुहोस्।
माउन्ट र क्रल रिक्त स्थान पनि जाँच गर्नुहोस्। यी स्थानहरूमा, सामान्यतया धेरै खुला ताराहरू हुन्छन्, एक साधारण पहुँचयोग्य स्रोत।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर क्यालिब्रेट गर्दै:
तपाईंको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बग) डिटेक्टरमा स्विच गर्नुहोस्, डायल-अप मोडेर र यसलाई चिकनी सतहमा सेट गर्नुहोस्। यो छिटो ब्लीपिंग सुरू गर्नु पर्छ।
सम्म bleeping सम्पूर्ण रोक्छ तल रेडियो आवृत्ति डिटेक्टर पछाडि डायल गर्नुहोस्।
तपाईंको सेल फोनबाट अर्कोमा कल गर्नुहोस् जबकि ठीक रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरको छेउमा उभिनुहोस्। यो फेरि तुरुन्तै बिपिंग सुरु गर्नुपर्दछ।
10 को बारे मा 12 फिट दूर रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरबाट सेल फोन जडान खुला राख्दा सार्नुहोस्। डिटेक्टरले बिपिंगमा बोक्नुपर्छ, तर अधिक बिस्तारै, प्रति मिनेट लगभग 160 बीट्सको दरमा। यदि यो 120 बिट प्रति मिनेट दुई प्रति सेकेन्ड भन्दा बिस्तारै बिपिंग हुँदैछ भने, डायल-अपलाई केही हदसम्म यसको संवेदनशीलता बढाउनको लागि बदल्नुहोस्। यदि यो प्रति मिनेट 160 धडकन भन्दा बढि छिटो पिटिरहेको छ भने, डायललाई अलि तल बदल्नुहोस्।
कोठामा सबै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको बाहिरी भागहरूमा बिस्तारै रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर लैजानुहोस्, प्रत्येक उपकरणबाट दुई फिट टाढा रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर राख्नुहोस्। यदि यो ब्लीप गर्न थाल्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले स्क्यान गरिरहनु भएको उपकरण स्विच अफ छ र फेरि स्क्यान गर्नुहोस्। रेडियो आवृत्ति डिटेक्टर चाँडै bleep जारी भने, तपाईंले एक बग फेला हुन सक्छ।
यो प्रक्रिया कोठामा सबै वैकल्पिक चीजहरू cab फाईल क्याबिनेट, डेस्क, कुर्सीहरू, इत्यादिसँगै राख्नुहोस् र अन्तमा भित्ताहरूसँग। रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरको एकल बीपले तपाईंलाई बग फेला पारेको कुरा औंल्याउँदैन; एक एक रेडियो संकेत प्रसारण दर्शाउन कुन, छिटो, स्थिर bleeping लागि वैकल्पिक रूपमा सुन्नुहोस्।
नजिकैको पुलिस स्टेशनमा कल गर्नुहोस् यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंले केहि पाउनुभएको छ।
के गर्ने यदि तपाईंले लुकेको क्यामेरा रिकभर गर्नुभयो भने:
यदि कसैले घर, होटल कोठा, भाडा, र कारहरूमा कहीं क्यामेरा लुकाउँछ भने, यो कानूनको बिरूद्ध हो र कानूनको अनुमतिले मात्रै तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, एक भाडा कम्पनीहरु को नियमहरु मा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणहरु को लागी कि उनीहरु लाईस्टिंग को लागी उनीहरु सबै सूचिहरु ग्याजेटहरु को सुची को लागी आवश्यक छ, र उनीहरु कुनै निगरानी ग्याजेटहरु को भित्र छ कि बेडरूम र बाथरूम को बेवास्ता कुनै खास स्थान को भित्री छानबिन। तिनीहरू खुलासा गरिएको छ कि भनेर। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले लि vacation्क कोठामा बुक गर्नु अघि नै भान्ते क्यामेराको कुनै उल्लेखको लागि सावधानीपूर्वक छुट्टी भाडा लिस्टिंग जाँच गर्नुभयो। यदि तपाइँ तपाइँको छुट्टी भाडामा एक भेट्टाउनुहुन्छ भने, तुरुन्तै छोड्नुहोस् र कम्पनीलाई भन्नुहोस्। तपाईं होटल को कोठा मा एक लुकेका क्यामेरा मार्फत आउन भने, सीधा दूर एक कोठा परिवर्तन को लागि अनुरोध। हाम्रो उच्च-गुणवत्ता निगरानी उत्पादनहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लसनमा लुकेका क्यामेराहरू पुलिस अधिकार क्षेत्र बीच भिन्न हुन्छन्। धेरै अवस्थाहरूमा, यो कसैलाई गैरकानुनी हुन सक्छ तपाईंको ज्ञान बिना तपाईंलाई रेकर्ड गर्न। टेक्नोलोजी भएपछि, क्यामेरा र सुन्ने उपकरणहरू शान्त, सानो र अधिक सजीलो क्यामफ्लाज भएको छ। जबकि यो निगरानी संचालन गर्न को लागी कसैको लागि ठूलो हो, यसले prying आँखाबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने तपाईंको क्षमतालाई ढिला बनाउँदछ, पूर्ण एक्लोसनमा भए पनि। केही केसहरूमा तपाइँ आफ्नो क्षेत्राधिकार कानूनहरु द्वारा लुकेका क्यामेराको बिरूद्ध संरक्षित हुन सक्नुहुन्छ - उदाहरणका लागि, पुलिसले यी उपकरणहरु बिना वारेन्ट बिना रोक्न सक्दैन, र निजी नागरिकले प्राय: कुनै पनि स्थानमा ध्वनि वा भिडियो निजी साइटमा ज्ञान र अनुमति बिना रेकर्ड गर्न सक्दैनन्। व्यक्ति रेकर्ड भैरहेको छ - लुकेका उपकरणहरू कसरी पक्का गर्ने भन्ने बारे जान्नु भनेको उनीहरूको बिरूद्ध तपाईंको सुरक्षा गर्नको लागि डिजाइन गरिएका कानूनहरू भन्दा अधिक मूल्यवान हुन सक्छ।
यदि तपाइँले तपाइँको गोपनीयतालाई हानी गर्दै कसैले कानून भ breaking्ग गरेको देख्नुहुन्छ भने, पुलिसलाई एकचोटि सूचित गर्नुहोस्, होटल व्यवस्थापन यदि तपाइँ छुट्टिहरु वा मिडियाको लागि होटेलमा हुनुहुन्छ भने। तपाईंले कुनै ध्यान दिएर कुनै उपकरण वा फर्निचर नलगाएको निश्चित गर्नको लागि तपाईंले ठूलो सावधानीको साथ कोठा खोजी गर्नुपर्नेछ, किनकि यसले नागरिक वा आपराधिक कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ (यदि तपाईं होटेलमा हुनुहुन्छ भने)। होटेल स्टाफको साथ तातो शब्दहरूको तर्कहरू वेवास्ता गर्नुहोस् जुन शारीरिक परिणाममा जान सक्छ।
जब तपाईं लुकेका क्यामेराको लागि जाँच गर्नुहुन्न:
सबै समय लुकेका क्यामेराको लागि जाँच गर्नु राम्रो विचार होइन। उन्नत अपरेशनल अवधारणाका कार्यवाहक सीईओ र विशेष सेनाका एक पूर्व सैनिक र ग्रीन बेरेटको धारणा छ कि रुस र चीन जस्ता धेरै देशहरूमा सरकारी खुफिया सेवाहरूले सक्रिय पर्यवेक्षण गर्ने होटलहरूको निगरानी गर्दछ। जो कोहीले पनि उनीहरूको आवासमा लुकेका उपकरणहरू पत्ता लगाउन खोज प्रविधिको प्रयोग गरेर हेर्ने सम्भावना एक डराउने खुफिया अपरेटिवको रूपमा ब्रान्ड गरिएको हुन सक्छ र तदनुसार व्यवहार गरिन्छ। यी देशहरूमा हल्का महँगो खोज उपकरण पनि ल्याउँदा यात्रीलाई तातो पानीमा लैजान सम्भव छ, कहिलेकाँही एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कनु अघि।
3841 कुल दृश्यहरू 1 हेराइ आज
कारा मेनगेसेक मोबिल पुण्य कामरा टेरसेम्बुनी डि मोबिल (१)
Www लाफाजी नेतृत्व com (१)
WWW LAFAZI NET (१)
دوربین هتل مهمانسرا سوییت مخفی (1)